“𝗡𝗠𝗗𝗖 𝗩𝗦𝗙 𝟮.𝟬 ” ” 𝗧𝗼𝘂𝗿𝗶𝘀𝗺 𝗪𝗲𝗲𝗸” – NMDC
By NMDC Editor Uncategorized Comments Off on “𝗡𝗠𝗗𝗖 𝗩𝗦𝗙 𝟮.𝟬 ” ” 𝗧𝗼𝘂𝗿𝗶𝘀𝗺 𝗪𝗲𝗲𝗸”
NMDCSU နဲ့ major SA များပူးပေါင်းပြီး NMDC VSF 2.0 Forum ကိုကျင်းပလာခဲ့တာ အခုဆိုရင်တော့ Tourism Week သို့ရောက်ရှိလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်…
Tourism Student Association(TSA) အနေနဲ့ Tourism Week မှာဘယ်လိုမျိုး program တွေကိုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက် တင်ဆက်ပေးမှာလဲ
ဘာတွေပါဝင်မလဲ ဆိုတာမပြောခင် Program Title လေးကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်…
” 𝗠𝗼𝗱𝗲𝗿𝗻 𝗦𝘂𝗿𝘃𝗶𝘃𝗮𝗹 𝗼𝗳 𝗠𝘆𝗮𝗻𝗺𝗮𝗿 𝗧𝗼𝘂𝗿𝗶𝘀𝗺 : 𝗧𝗵𝗶𝗻𝗴𝘀 𝘁𝗼 𝗱𝗼 𝘁𝗼 𝗢𝘃𝗲𝗿𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗣𝗼𝘀𝘁 𝗖𝗼𝘃𝗶𝗱 𝗖𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲𝘀 “
ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက် ဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ်အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်..
Tourism Week ကိုတော့လာမည့် August 8 &9နှစ်ရက်တွင်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်…
Day 1 မှာ Program Title ကိုအခြေခံပြီး နယ်ပယ်အသီးသီးမှပညာရှင်များမှ ဆွေးနွေးပေးသွားမယ့် Live Panel Discussion လေးပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်…
ဒါ့အပြင် ဒီဆွေးနွေးပွဲလေးမှာ ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများဘက်မှ သိလိုသောအကြောင်းအရာများကို
Panelist အတတ်ပညာရှင်များကို မေးမြန်းခွင့်ရရှိမှာဖြစ်လို့ မေးခွန်းလေးတွေကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ ပြောကြားပါရစေ…
Day2မှာဆိုရင်တော့ Zoom Application ကိုအသုံးပြုပြီး Workshop ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်..
Workshop ကိုလည်း Morning Breakout Session နှင့် Evening Breakout Session ဆိုပြီး စုစုပေါင်း Workshop4ခုပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်…
Workshop တစ်ခုကို ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူ အယောက် ၅၀ သာလက်ခံမှာဖြစ်ပြီး workshop က4ခုဆိုတော့ စုစုပေါင်း ကျောင်းသား/ကျောင်းသူအယောက် ၂၀၀ သာတက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်…
ဒါကြောင့် ဒီ forum ပွဲလေးကို ကျောင်းသား/သူများ လက်လွတ်မခံဘဲ ပါဝင်ဆင်နွှဲဖို့ ဖိတ်ခေါ်အပ်လိုက်ရပါတယ်….
ဒါ့အပြင် Panelists များနဲ့ workshop facilitators များကိုနောက်ရက်များတွင်ဆက်လက်ဖော်ပြသွားမည်ဖြစ်လို့ NMDCSU နဲ့TSA page တွေမှာစောင့်မျှော်ပေးကြဖို့ ပြောကြားပါရစေ…..
Protect Yourself, Your family, Your beloved ones and your Country. These are7simple steps to protect yourself and others from COVID-19.7[...]